Famoahana hazo tsy ara-dalàna any Morondava
Réseau Malina 18 Jiona 2019 5099 vues
Nosoratan'i Yves S. et Riana Raymond
Talem-paritry ny ala voasaringotra…
Voatondro amin’ny famoahana hazo tsy ara-dalàna any amin’ny faritry Menabe ny depiote teo aloha voafidy tany Mahabo sy ny talem-paritry ny ala any Morondava,ary jeneraly iray. Tapitra nanonona azy ireo avokoa ny tompon’andraikitra tany an-toerana, hatramin’ny mpandraharaha hazo izay nanaovana ny fanadihadiana. Anisan’ny nampipongatra azy ity ny fahatraran’ny polisy ny fiara Sprinter an’ny Dredd (Direction Régionale de l’Environnement et du Développement Durable) Morondava nitondra entana voamboana efa voakarakara tany Antsirabe ny 25 novambra 2018. Tsy nisy taratasy ara-dalàna anefa ireo hazo ireo, izay efa nahazoan’ny polisy angom-baovao mialoha. Rehefa nosakanana ilay fiara, dia hita tao tokoa ny hazo voamboana. Ny taratasy fanomezan-dalana nahafahana nitondra azy anefa efa lany daty. “Fahazoandalana mitondra hazo amin’ny daty 13 ka hatramin’ny 20 novambra no nampiasana tamin’izany. Notanana avy hatrany ny fiara sy ny hazo. Nampahafantarina ny tompony ka nandefa taratasy fanindroany indray nanitsy ilay tsy ara-dalàna teo aloha”, hoy ny fanazavan’ny tompon’andraikitra ao Antsirabe.
“Mahagaga ihany ny fomba nataon’ity tompon’andraikitra [Talem-paritry ny ala ao Morondava] ity. Voalazan’ny polisy fa efa mitatitra hazo mandalo eo Antsirabe foana ilay fiara io, ka izao nosakanan’ny polisy izao no niafarany”, hoy ny fanazavana ihany. Fomba fiasan’ireo olona mpamoaka hazo avy any Menabe ny mampanaraka taratasy entina amoahana izay tratra tsy ara-dalàna, izay soniavin’ny tompon’andraikitry ny ala avy any Morondava.
Nandritra ny resadresaka tamin’ny volana marsa niarahana tamin’i Ramatoa Andoniaina Nirisoa, Talem-paritry ny ala any Morondava, , dia tsy nandà mihitsy fa azy ny fiara sy ny hazo voasakana tao Antsirabe, saingy noho ny olana teo ara-mekanika, tara telo andro ny fandehanan’ny fiara. “Ahy tokoa ny fiara sy ireo hazo nentina efa voarafitra nahitana valindrihana sy tohatra, halefa any Ambositra. Nisy olana anefa ny fiara ka tsy afaka nandeha tamin’ny andro voatondro tao anaty taratasy. Nangataka taratasy nanamarina ny maha ara-dalàna ny entana ny tao Antsirabe, ka rehefa nalefa izany, nalefa ny hazo sy ny fiara ary efa any Ambositra”, hoy ny fanazavana. Nolaviny kosa anefa ny filazana fa efa mpitondra hazo matetika io fiarany io are nambarany fa io indray mandeha io ihany no nampiasany azy tamin’izany. Marihina anefa fa tao anatin’ny fotoana namoahan’ny fanjakana didy fandraràna ny fitrandrahana hazo, fitondrana hazo na efa voarafitra aza, no tratra ny fiaran’ny talem-paritry ny ala io.
…Depiote teo aloha ihany koa
Anisan’ny voatondro ihany koa ny depiote teo aloha voafidy tao Mahabo, Raveloson Ludovic antsoina hoe Leva. Tao Antsirabe no nivoahan’ny vaovao momba izany, ka voatondro tamin’izany ny kamiaon’io depiote io. “Ny 14 sy 15 febroary 2019 lasa teo dia nahazo vaovao ny teto Antsirabe fa misy kamiao “semi-remorque” miloko mavo sy mena mitondra ny laharana 2307 TBJ sy 6954 TBF an’io depiote io miainga avy any Morondava mitondra voamboana, ka natao ny fiandrasana azy io teto Antsirabe nandritra ny roa alina nisesy. Hatramin’izao anefa tsy nipoitra ilay kamiao. Mety efa nisy ny nampilaza mialoha izy ireo ka tsy nandalo. Mbola mandeha ny fikaroham-baovao manodidina azy reoo. Ny 28 febroary no nisy voamboana tratra tany Mandoto”, hoy ny fanazavana avy amin’ny tompon’andraikitra ao Antsirabe ihany.
Mpiasa iray niasa tao amin’ilay depiote efa ho 8 taona no nanamafy fa manao io asa fanondranana hazo io ilay olom-boafidy teo aloha. “Misy ny fiaraha-miasan’izy io amin’ny manam-pahefana avy any Morondava ary anisan’isany ny talem-paritry ny ala sy ny lehiben’ny faritra”, hoy ny fitantaran’ity mpiasan’ny depiote ity izay mahalala tsara ny fomba fiasany ary milaza fa voaaron’ny tambajotra matanjaka ny depiote sy ny mpiara-miasa aminy ka tsy misy afaka manao na inona na inona hanoherana azy.
… Ary Jeneraly iray mpanelalanelana
Anisan’ny voatonotonona ihany koa ny fisian’ny jeneraly manelanelana amin’ity resaka hazo ity. Nisy anarana jeneraly efa misotro ronono, antsoina hoe Tatanjaky voatonotonona. Voalaza fa izy io no miaro ireo mpanondrana hazo mandeha amin’iny lalam-pirenena faha-34 iny. Nisy ihany koa ny filazana anarana ramatoa antsoina hoe jeneraly Lala, izay tsy refesi-mandidy ihany koa amin’ny resaka hazo. “Raha vao mandalo ny kamiao milaza fa an’ny jeneraly ireo kamiao, tsy misy misakana izany”, hoy ny fanazavan’ireo nanaovana fanadihadiana, toy ny lehiben’ny faritra teo aloha, mpiasan’ny depiote teo aloha tao Mahabo. Mbola nanamafy ny fisian’ny jeneraly ao ambadik’ireo mpanondrana hazo ny tompon’andraikitra tao Antsirabe.
Nilaza ny depiote teo aloha, Leva, voafidy tao Mahabo fa tsy manao raharaham-barotra momba ny hazo indrindra taorian’ny nandraran’ny fanjakana ny fanaovana izany. “Fandraharahana momba ny vary sy katsaka no ataonay sy ny vady aman-janako. Tsy miditra amin’ny resaka hazo, ary miady amin’ny fandripahana isany aza ny tenako. Efa nisy ny fahavononana niara-niasa tamin’ny talem-paritry ny ala any Morondava saingy tsy tanteraka izany noho ny tsy fahavononan’ireo”, hoy ny depiote.
Milaza mitady porofo ny mpitandro ny filaminana
Ireo tompon’andraikitry ny filaminana ao Morondava, izay vao nandray ny asany vao haingana, toy ny kaomisera divizionera, Razafindranony Honorée, ny avy amin’ny zandarimaria , hatramin’ny lehiben’ny mpampanoa lalana ao Morondava samy nilaza fa mitady porofo momba ireo olona voatonontonona amin’ny fanondranana hazo ireo. Efa tonga teo amin’izy ireo hatrany ny anaran’ireo olona voatonontonona, saingy tsy ampy ny porofo. Samy efa manana lisitra anarana avy ireo tompon’andraikitra ao Morondava eo am-pelatanany. Olana anefa ny tsy fisian’ny porofo ampy sy ny mpitory. Voalaza fa efa nisy ny voasambotra, misy ny hazo tratra voatondro avy amin’ny toerana maromaro toy ny avy any Tsimahavao, Beloha, Ankiridihy, saingy tsy ahazoam-baovao marina momba ny olona voatonotonona amin’io fanondranana io.
Mifanilaka andrikitra sa tsikombakomba
Ny tompon’andraikim-panjakana ao amin’ny faritry Menabe dia toa mifanilaka andraikitra amin’io raharaha io. Voatonotonona amin’io fanondranana hazo ion y sasany amin’izy ireo, izay antony mahatonga ny fiahiahiana miely patrana izany. Tsy afaka ihany koa ireo mpandraharaha momba ny hazo izay mifanotsana sy mifanondro amin’ny famoahana hazo, ny fikarakarana taratasy amoahana izany. Nolazain’ny mpandraharaha iray antsoina hoe “Mon ami” fa tafakatra 40 tapitrisa ariary ny taratasy fahazoan-dalana mamoaka hazo saribidy. Io fifanakalozana amin’ny olona mpividy ny fahazoan-dalana, ireo manam-pahefana sy ireo olom-boafidy ireo dia anisany mampiroborobo ny kolikoly.
Tamin’ny fiandohan’ny volana mey, ny talem-paritry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy rehetra dia nasorina teo amin’ny toerany zry nosoloina tao aorian’ny filan-kevitry ny Ministra. Anisan’izany ny Talem-paritra ao Morondava, nafindra toerana any amin’ny faritra hafa.
Fitrandrahana volamena ao Betsiaka Ambilobe
Fivarotana tanim-panjakana ao Antananarivo : fanenjehana an-dRazaiarimanga Marie Meltine
Tetikasa lalankely: Kolikoly sy kitranoantrano ny fizarana ny tsenambaro-panjakana
Cisco Mandritsara: Manjaka ny fanararaotana fakam-bola amin’ny mpampianatra
Fahasalamana:Tsy mbola maha vaha olana ny Fonds d’equité hospitalier
QMM-Rio Tinto : Bokatrosa ny Fanjakana Malagasy
Malina © 2020 . Novokarin'ny GENIUS AT WORK